Resaka fombafomba miafina no nangalarana ny Satroboninahitra?
2011-12-06 @ 11:14 in Andavanandro
Na dia tsy te-hanoratra aza aho dia tery ihany hanoratra sy hamboraka ny hevitro adaladala. Atao hoe resaka politika toa misy zavatra ambadik'izay politika izay hatrany na misy ny fombafomba tsy miseho ampahibemaso atao hahazoana na hitazonana toerana.
Tsy te-hino aho saingy mampieritreritra ihany ilay fangalarana ny satroboninahitra an-dRanavalona irery ihany tao amin'ny Lapan'Andafiavaratra. Araka ny eriteritro mandeha dia resaka saimbolika no nangalarana azy fa tsy noho ny sandany loatra. Tsy ho afaka hanameloka na iza na iza na izany ary ary tsy tery hanaiky ny valin'ny fanadihadiana rahateo izay tsy fantatra na efa miandoha na mbola tsy misy tokotaniny. Toy izao manaraka izao ny hevitro adaladala rehetra manodidina azy ity ka amerenana ny tantara vitsivitsy :
Ny antony nanorenana dobo teo anoloan'ny Lapan'ny tanàna dia ho fanadiovana ny ra latsaka teo tamin'ny 1972 satria teo amin'io misy ny dobo io indrindra no nisian'ny olona maty voatifitra tamin'ny 13 mey 1972. Firariana mba ho voafafa ny heloka natao tamin'izany famonoana olona izany. Dia nofefena amin'izay mba tsy hisy intsony ny hetsi-bahoaka manongana ny fitondrana mijoro.
Fomba tsy fantatra antony loatra ny fametrahana faritra iray ao anatin'ny Lapan'ny tanana ho tsy azo itsahana ary tarafin'ny jiro lustre izay nataon'ny PHAT fanomezana ho an'ny Lapan'ny tanàna. Any ampiangonana misy faritra tsy dia fanitsaka loatra afa-tsy noho ny antony sarobidy fa ny ao kosa na inona na inona antony, matanjaka noho ny fivavahana na masina dia masina tokoa noho izany ilay faritra.
Tsy nankasitrahako loatra ilay fomba nentina nankalazana ny faha-400 taona ny tanànan'Antananarivo sy ny nitokanana ny Lapan'ny Tanànan'Antananarivo ka nanaovana diabe nidinana avy teny amin'ny Rovan'i Manjakamiadana mizotra ho eny Analakely. Ny fanasongadinana ny PHAT mivady no hitako navandravandra tamin'iny ho toy ny fanandratana azy. Ary aty aoriana ela dia tahaka ny nampisy eritreritra adala tanteraka fa tsy hoe izay no marina fa satroboninahitra sisa no tsy ampy. Fa izao: Efa nahita sarin'ny mpanjaka teto Imerina nitondra satroboninahitra ve ianareo? Toa ny mpanjakavavy ihany no nitondra e?
Fa fombafomba fihantsiana na famonoan-kasina no heverin'ny hevitra adaladalako nanaovan-dRatsiraka ilay paompy teny Ivato, satria nisy koa ny paompy nataon'i Andry Rajoelina sy Camille Vital tao amin'ny Toby RTS Soanierana indray maka ary naseho tele. Fomba famonoan-kasina ilay Karaoke hira mivalana natao teny an-dalana ary hafatra manokana ho an'ny PHAT izay mpikarakara fety, nanana ny lazany ny LIVE fanao tao amin'ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena.
Ary dia nirona ho azy tany amin'ny hoe fombafomba no nisian'ny halatra satroboninahitra tao amin'ny Lapan'Andafiavaratra (Lapan'ny Hova fa tsy Lapan'Andriana) sy ny fangalarana bala arivo an'ny RFI tao amin'ny BANI ny eritreritro. Satroboninahitra iray sy bala arivo no nangalarina, resaka mifono misitery, ary ilay misitery dia mirona amin'ny hoe fombam-pivavahana miafina no nisian'ny halatra.
Halatra saimbolika: Tsy izay tsaratsara rehetra no nangalarina tao Andafiavaratra fa ilay satroboninahitra fametrahana amin'ny fitoerany ho mpanjakavavy ny olona iray. Ny bala arivo tsy mihoatra tsy nanalana kosa isa manavaka ny tarigetran'Antananarivo hoe "Ny arivolahy tsy maty indray andro". Antananarivo dia tananan'ny Arivolahy no niavian'anarana, arivolahy izay miaramila. Fomba inona izany no natao? Fomba fampivondronana ho iray ny mpitondra iray sy ny miaramila? sa fomba hametrahana olona iray ho mpitondra ho eken'ny miaramila? Tombatombana tsy dia mitondra mankaiza loatra...
Nahavariana ihany koa ny andron'ny 4 desambra, tsy mahalala ny tononandron'io loatra aho fa tsy kisendrasendra ny nahaverezan'ny satroboninahitra iray sy ny bala arivo ho samy alin'ny Asabotsy mifoha Alahady avokoa. Misy zavatra kendrena ao anatiny. Samy azo ahiahiana avokoa na ny eo amin'ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana. Fa ny tsy tokony adinoina dia ny datin'ny 4 desambra 1984 no nanafihan'ny Kung-fu ny toby Pochard nisy ny TTS tamin'ny androny ka naharava io vondrona mpampihorohoro nokaramain'ny fanjakana hanindry ny vahoakan'Antananarivo. Be loatra ny kisendrasendra ka tsy mety hidify amin'ny hoe fihetsika "fombafomba" miafina no antony nangalarana ilay satroboninahitra iray sy ireo bala arivo.
Jentilisa 6 desambra 2011
Nampidirin'i jentilisa | 31 Hevitra | Trackback (0) | Permalink